Jacob Frey oo ku guuleystay Duqa Magaalada Minneapolis -
Jacob Frey oo ku guuleystay Duqa Magaalada Minneapolis
Waxaa la soo gebagabeeyay tirinta codadka tartanka doorashada ee tartanka duqa magaalada Minneapolis, waxaana natiijadu ay noqotay in uu ku guulaystay musharrax Jacob Frey.
Jacob Frey ayaa ka guuleystay 13 musharax oo ay ku jirto duqdii hore ee magaalada Minneapolis Betsy Hodges. Jacob Frey ayaa ah 36 sano jir.
Musharax Jacob Frey ayaa helay codad dhan 46,716 taas oo ah 57.2% codadka la tiriyey. Doorashadan ayaa si weyn loogu tartamayey, waxaana ay ahayd mid si weyn indha loogu hayey. Dadweynaha usoo baxay in ay codeeyaan shalay ayaa noqday kuwii ugu badnaa ee doorashadda magaalada Minnneapolis ka qayb qaata ilaa iyo sannadkii 1993.
Haddaba codbixiyayaasha magaalada Minneapolis ayaa u muuqdeen inay rabaan hoggaan cusub, waxayna go’aansadeen oo ay u codeyeen in Jacob Frey inuu yahay is bedelka siyaasadeed ee ugu wanaagsanaa ee ay ku bedelayaan duqdii hore ee magaalada Minnepolis Betsy Hodges.
Cabad Cumar iyo Maxamed Amiin oo kamid ah shaqaalaha ololaha Jacob Frey ayaa la sawiran duqa magaalada Minneaplis loo doortay.
Musharax Jaco Frey ayaa isagu soo ururiyey lacagta ugu badan ee musharixiinta iyagu u tartamayey kursiga duqa magaalada. Sidoo kale, ololaha doorasho ee Jacob Frey ayaa dhisay olole adag oo isaga iyo dadkii la shaqaynayey u ogolaaday in ay garaacaan kumanaan albaab.
Waxaa kale oo hadda soo baxaya natiijooyinka dhamaan kuraasta kale ee ay dadweynaha reer Minneapolis u codeyeen shalay. Kuraasta wali la sugayo natiijadda dhabta ah ayaa waxaa kamid ah xubnaha golaha deegaanka ee magaalada Minneapolis iyo Guddiga gudoonka goobaha carwooyinka magaalada Minneapolis.
Marka ay natiijooyinka dhabta ahi soo baxaan oo la dhameeyo tirinta codeynta ayaan idiin soo gudbin doonta natiijooyinka oo dhan.